कविको ‘रचना’ « Emakalu Online
“मलाई मान्छेको छेउमा धेरै काली काली भन्ने होइन है भन्द्याछु ।”
रचना फुलिई । हुन पनि किन नफुलियोस् कलेजको अगाडी बस्थ्यौँ । गोरी मान्छेलाई म काली सम्बोधन गर्थेँ ।
“तिम्रो डटपेन देउन ।” म नम्र भएर मागेँ । रचनाको चुल्ठीमा बाँकी रातो डटपेन थियो ।
“के म तिम्रो सुसारे होकी ?” आँखा तरी ।
हाम्रो सम्बन्धमा यस्तैयस्तै हुन्थ्यो रचना र मेरो । कलेज पढ्न थालेदेखि नै हामी नजिक हुन थाल्यौँ ।
डटपेन दिई । लेक्चर आउनु भयो । नोट बनाउदै बित्थ्यो घण्टी ।
मंसिरको दिन जाडो लाग्न थालिसकेको थियो, बिहान बिहान बरुण क्याम्पसको ठाउँ प्रायः रचना र म सँगै हुन्थ्यौँ । क्याम्पसको माथिल्लो डाँडा उक्लिएपछि पहेँलै धान पाकेको देखिन्थ्यो वारीपारी सबै ।
डाँडामा रचना उभिएकी छ । म बसिरिहेको छु ।
“ऊ त्यहीँ बाटो होइन तिम्रो घर जाने बाटो ?”
मंैले रचनालाई पहिले नै भनेको थिएँ ।
ढाँडेभिरको छातीमा नागबेली बाटो छ । लामो केश छड्के पारेर कोरेकी, अलिअलि हिस्सी परेकी । पारीतिर घाम लागीसकेको थियो । साँच्चै मनमोहक थियो त्यो पल । म उस्लाई हेरीरहेको थिएँ ।
अर्को घण्टी लाग्यो । रचनाले मेरो हात समाइ, जाउँ भन्ने इसारा दिई ।
पुसको १०/१२ गते कहिले हो यकिन भएन, म मातेर कोठामा आएको थिएँ । साँझमा लर्खराउँदै लर्खराउँदै रचनाकोमा पुगेँ, खाना पकाउदै थिइ रचना ।
“ओइ, ढोका खोलन ।” ढोका खोली विस्तारै ।
“ओफ्, ओइ मतुवा के बिघ्न घिचेको ?” विस्तारै पसेँ ।
रचना पनि डेरा बसेकी, म पनि । वल्लो घर पल्लो घर । तरकारी पकाउँदै थिई रचना । उस्को बिस्तारामा पल्टिएँ ।
“कहाँकहाँ देखि घिचेर यहाँ तमाशा देखाउनु पर्दैन है भन्द्याछु ।”
म चुपचाप सुनिरहेँ ।
“अरु बेलामा आऊ भन्दा त तिमीहरु आइमाइको कोठमा केके हुन्छ रे । लाज पो लाग्छ रे । जब मातेको बेला, साह्रो भाको बेला त होनी मलाई सम्झिने ।”
मलाई पनि भन्न मन लागेको थियो, रचना मैंले तिमिलाई कत्ति मन पराउछु भनेर । तर चुपचाप सुनिरहेँ ।
खाना तयार पारी । दुई ठाउँमा भाग लगाई । म सुतेको जस्तो गरेर लुकीलुकी हेर्थेँ ।
“ओइ मतुवा उठ, खाउँ खाना,” निर्देशन आयो । एउटा थाल बोकेर मेरो समिप आई ।
“हेर, रचना म एक्लै त खाँदै खाँन्न ।”
“ल, म पनि त खान्छु ।” अर्को थाल देखाई ।
“नाई, रचना आज तिमी सँगै एउटै थालमा खाने हो, होइन भने म खाँन्न ।”
धेरै गनथन भयो, मलाई चम्चिले खुवाउन थाली र ऊ पनि त्यहीँ खाई ।
“पछि स्वास्नी चाहीँ कुन खालकी भेटाउने हो, म जस्तै आइ भने चाहीँ कुटेर ढुटो बनाउला । हैन के भएको केटा हौ ? तिम्रो नोट मैंले नै, लुगा धोइ दिनु मैंले नै, हुँदा हुँदा घिचाउनुनी मैंले ।”
मलाई चम्चीले खुवाउँदै । म उस्को निश्छलको परिक्षा लिँदै थिएँ । हुन पनि एउटी पत्नीले जतिकै सेवा गरी ।
खाना सकेर पल्टिएँ फेरी । रचना धन्दा गर्न थाली ।
“रचना म आज रुम जान सक्दिन । यहीँ सुत्छु न है ।”
“हुँदैन हुँदैन केटीको रुममा आएर सुत्छु भन्न लाज हुँदैन तिम्लाई ?”
“म रुम जान सक्दिन नि त, त्यसो भए, पु¥याइदेउन । ”
बाहिर टहटह जून लागीरहेको थियो । रचनाले मलाई थाम्दैथाम्दै हिँडाली, कोहीकोही बेला जीउ छाडीदिन्थेँ, ऊ सम्हाल्थी ।
रुम पुग्यौँ । विस्तारामा छोडी मलाई । मैंले गल्र्याम्मै अंगालो हालेँ ।
“मतुवाले आज के गरेको हौ ?” मेरो हात फुस्काउन थाली । मैंले झन कसेँ ।
“होइन, छोरीमान्छेको यो अंगमा छुन हुन्न भन्ने थाहा छैन ?” हत्तपत्त हात हटाएँ ।
“यसरी छुँदा पर्ला नी तिर्न ।”
“के ? ” अन्जान प्रश्न मेरो ।
“यहीँ सुत तिमी पनि । पर…..पो तिमी केटी मान्छेको रुम, यहाँ त हामी केटाको हो, केही हुन्न ।”
“उम्म, हुन्छ होला । फेरी तिमी भोलि नै मेरो घरमा रक्सी र सुँगुरको फिला बोकेर तिम्रा मान्छे पठाउनु पर्लानी ।”
के हिम्मत छ ?” म केही बोलिन ।
मलाई बिस्तारै ओछ्यानमा सुताएर गई । ढोकाबाट निस्किई । ढोका ढ्याक्क पारीई । जूनको टहकमा हिँडीई । मैंले झ्यालबाट हेरिरहेँ ।
भोलि बिहानै आई । सदा झैँ कलेज जानेआउने भइ रह्यो ।
पुस पनि बित्यो, माघे संक्रान्तिमा आ–आफ्नो घर जाने भयौँ । किनकिन रचना रोई ।
“रचना किन आँशु झारेको ?”
“कवि म सपनामा मरेको मात्र देख्छु । आजभोलि छुटेपछि मलाई त भेट होला जस्तो पनि लाग्दैन । म तिम्लाई जुन दिन देखि भेटेँ त्यहीँ देखि मनपराउन थालेकी छु । नभनेकी मात्र ।”
तुम्लिङमा डम्म हुस्सु लागेको छ । झुल्के घामले अलिअलि छोएको छ । एकदमै भावुक बनेकी छ । अन्ततः त्यस दिन हामी छुट्यौँ । सायद रचना रुदै बाटो लागीई । माघे संक्रान्तिमा घर पुगेर हाम्रो सम्पर्क भएन ।
समय धेरै बितेछ । रचनाको अभाव साँच्चै नै हुन थाल्यो । गाँइगुँई सुन्न थालेँ । रचना बिरामी परेर घोपा क्याम्प लगेको छ भनेर । फोन लागेको थिएन । सायद फागुन लाग्नै आँटेको हुनुपर्छ । एकदिन मलाई फोन आयो नयाँ नम्बरबाट ।
“कहाँ छ्यौ ?”
“म धरानमा छु । बाँच्दिन होला कवि…, मलाई भेट्न आऊ ।”
मुटुको गति बढेर आयो । तप्पतप्प पसिना आयो, बोल्न सकिँन ।
भोलि बिहानै खाँदबारीबाट धरान हिडेँ । बाटोमा बिरालोले बाटो काट्यो । मनमा आँधि हुरी एकैसाथ आयो । रुन थाले छु । फागुनको एक गते रहेछ । बस हुँकिदै थियो । म रचनाको दर्शन पाउन आतुर थिएँ । तीन बज्दै थियो सायद भानु चौक पुग्दा । भालिपल्ट रचनालाई भट्ने निधो गरेँ । साँझ प¥यो । सबै आ–आफ्नो गन्तव्यतिर लम्किरहेका थिए । म केवल रचनालाई भेट्न हिँडीरहेको थिएँ ।
रातभरको निद्रा हरायो, कुकुर रुँदै थियो । फोनमा कुरा गर्न मिल्दैन थियो । बिहानै टेम्पोमा घोपा पुगेँ । आज डिसचार्ज गर्ने दिन, वरिपरी अनेक थरीका मान्छेहरु, म भने रचनाको खोजीमा थिएँ, हजारौंको भीडमा । एम्बुलेन्समा हालेर आफन्तको घरमा लान आँटेका थिए रचना ।
सामान्य परिचय भयो । रचना घटेर सिट्ठ भएकी थिई । आफन्तको घर पुगियो । घाम तीन मुढे हातको माथि थियो । मलाई छेउमा बोलाई उस्ले ।
“कवि… तिमी आयौ ?”
मेरो हात समाउदै पिलपिल आँशु खसाली । मन मनै केके भन्दै थिई खै, छेउछेउमा आफन्तहरु बसेका छन् । उनीहरु पनि अँध्यारो मुख लगाउन थाले ।
“अब मेरो आश नगर्नु, म बाँच्दिन, अवश्य पनि मेरो दिन आइसकेको छ ।
तिम्रो यति चोखो माया कमैले मात्र पाउँछ, जस्मा म पनि परेँ ।
………..खुशी छु कवि…………।
हाम्रो मिलन यसरी नै भइरहोस्, म मरे पनि तिमीसँगको कसम मर्ने छैन……..।” रोकिदैरोकिदै भनी । म मौन रहेँ ।
“अनि थाहा छ कवि रु यो रचना भनेकै कविको त होनी, अरु कसैको होइन ।
आज त भ्यालेन्टाइन डे, मलाई के दिन्छौ मेरो राजा ?” सारा अँध्यारो भएको महसुश भयो ।
“कवि तिमी त कथाकार हौ, यो हाम्रो जीवनको कथा पनि एकदिन लेख है ल । अनि भ्यालेन्टाइन डे को दिन विमोचन गर्नु है राजा । यो जीवनमा तिमीलाई भौतिक रुपमा साथ दिन सकिन माफ दिन्छौ नी हैन ?”
लामो श्वास लिई, आँशु बरर्र खसाली । घामपानी जोडले प¥यो, अशुभ हो भन्ने आभाष दियो । एकछिन शान्त भएर चुपचाप लागीई ।
एकैछिनमा बोल्नै छाडी….।
सबै रोए । मसँग म पनि…..।